ရန်ကုန် – Page2– Eleven Media Group
Posted on August 25, 2018 August 26, 2018 by Eleven Media Group
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆူးလေလမ်း တစ်နေရာအား ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- ကျော်ဇင်ဖြိုး)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရေး လမ်းခင်းခြင်း အပါအ၀င် လမ်းလုပ်ငန်းများအတွက် ငွေကျပ် ၆၂၁ဘီလျံကျော်ကို ဘဏ္ဍာနှစ် ကိုးနှစ်အတွင်း သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ရသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ လက်ရှိ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ခြောက်လအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ လမ်း၊ တံတား၊ လျှပ်စစ်မီးနှင့် ရေရရှိရေး အသုံးစရိတ်များအရ လမ်းလုပ်ငန်းများ အတွက် သုံးစွဲမှုများ အနေဖြင့် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အမှန်စာရင်းအရ ငွေကျပ်သန်း ၁၂၃၅၆ ဒသမ ၄၀၂သန်း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးတွင် ငွေကျပ် ၄၉၁၃၀ ဒသမ ၆၀၀ သန်း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ငွေကျပ် ၄၉၈၁၉ ဒသမ ၆၃၆ သန်း ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ငွေကျပ်သန်း ၉၃၈၈၃ ဒသမ ၅၀၆ သန်း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၉၇၈၈၇ ဒသမ ၃၀၈ သန်း သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ NLD အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှေးပြေးအမှန်စာရင်းအရ ငွေကျပ် ၇၁၄၉၁ ဒသမ ၅၁၅ သန်း၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြုပြင်ပြီး ခန့်မှန်းခြေ စာရင်းအရ ငွေကျပ် ၁၀၆၁၁၇ ဒသမ ၈၇၅ သန်းနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ခြောက်လစာရင်းအရ ငွေကျပ် ၅၅၁၀၈ ဒသမ ၆၀၄ သန်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီ လမှ စက်တင်ဘာလ ခြောက်လအထိ ကိုးနှစ်အတွင်း လမ်းလုပ်ငန်းများအတွက် စုစုပေါင်းငွေကျပ် ၆၂၁၄၈၆ ဒသမ ၈၅၆ သန်း သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် (၃၃) မြို့နယ်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ သာမန်အသုံးစရိတ် ငွေကျပ် ၁၂၃၀၀ ဒသမ ၉၀၀ သန်း၊ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် ငွေကျပ် ၅၀၂၉၂ ဒသမ ၆၆၇ သန်းကို သုံးစွဲထားကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၃၃ မြို့နယ်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ သာမန်အသုံးစရိတ် ငွေကျပ် ၃၂၃၄ ဒသမ ၄၁၆ သန်း၊ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် ငွေကျပ် ၂၈၄၆၁ ဒသမ ၈၅၈ သန်း သုံးစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး နယ်နိမိတ်ပြင်ပရှိ မြိ့နယ် ၁၂ မြို့နယ်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် လမ်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးလက်ဦးစီးဌာန အနေဖြင့် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်မှာ ငွေကျပ် ၁၇၂၄၃ ဒသမ ၀၀၆ သန်းအားလည်းကောင်း၊ လမ်းဦးစီးဌာန အနေဖြင့် သာမန်အသုံးစရိတ်မှာ ငွေကျပ် ၁၄၃၂ ဒသမ ၀၇၅ သန်း၊ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်မှာ ငွေကျပ် ၁၈၁၉ ဒသမ ၈၅၄ သန်းအားလည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ အနေဖြင့် သာမန်အသုံးစားရိတ်မှာ ငွေကျပ် ၁၇၀ ဒသမ ၁၁၈ သန်း၊ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်မှာ ငွေကျပ် ၂၄၆၅ ဒသမ ၀၉၀ သန်းအား လည်းကောင်း အသုံးပြုထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged ရန်ကုန်LeaveaComment on ဘဏ္ဍာနှစ် ကိုးနှစ်အတွင်း ကျပ် ၆၂၁ ဘီလျံကျော်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လမ်းခင်းခြင်းနှင့် လမ်းလုပ်ငန်းများအတွက် သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း သိရ
Posted in NewsTagged ရန်ကုန်LeaveaComment on ရန်ကုန်မြို့သည် ဥပဒေစိုးမိုးမှု ပျက်ပြားသော အခြေအနေ၌ ရှိမနေဘဲ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော အခြေအနေတွင် ရှိနေဟု ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား
Posted on August 23, 2018 August 24, 2018 by ဆန်းထူးအောင်
ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေလမ်းပေါ်တွင် ရပ်တန့်ထားသည့် ယာဉ်အချို့ကို တွေ့ရစဉ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့တွင်း ခြောက်မြို့နယ်တွင် ယာဉ်ရပ်နားခ တစ်နာရီ ကျပ် ၂၀၀ နှုန်းဖြင့် ပြန်လည်ကောက်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ တင်ဒါခေါ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့လောက်မှာ ကောက်နိုင်ဖို့ စဉ်းစားနေတယ်။ မြို့တွင်းခြောက်မြို့နယ်မှာ ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံဖို့နေရာ အကြမ်းဖျင်းကတော့ ၀ါးတန်းလမ်း လောက်ကနေပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းလောက်ထိ ပါတယ်။ နံပါတ်တပ်လမ်းတွေကို မကောက်ဘူး။ အမည်တပ်လမ်းတွေကို ကောက်မယ်။ တစ်နာရီကို ကျပ် ၂၀၀ နှုန်း ကောက်ခံမှာ ဖြစ်တယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်မေမေသွယ်က ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံမည့် အချိန်သည် မနက် ၈ နာရီမှ ည ၆ နာရီအထိ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည် ကောက်ခံရန် ပြုလုပ်ရခြင်းသည် ယာဉ်များမှ စည်းကမ်းမဲ့စွာ ယာဉ်ရပ်နားမှုများကြောင့် ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ဘာဖြစ်လို့ ယာဉ်ရပ်နားခကို ပြန်ကောက်ရလဲဆိုတော့ ကားတွေက နှစ်ထပ်ရပ်တာတွေ ဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းတာကို ထိန်းသိမ်းချင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက လိုင်စင်ဝင်တဲ့အခါ ဘီးခွန်၊ ယာဉ်ရပ်နားခရော ညအိပ်ခွန်ရော သုံးခုလုံးပါတယ်။ အရင်ဥပဒေတုန်းက နှစ်ခါကောက်သလို ဖြစ်နေတယ်။ အခုကြတော့ ဘီးခွန်သီးသန့်ပဲ ကောက်လိုက်တယ်။ ယာဉ်ရပ်နားခကို သီးသန့်ကောက်မယ်ဆို ကောက်လို့ရတယ်” ဟု ဒေါ်မေမေသွယ်က ပြောကြားသည်။
ယာဉ်ရပ်နားခအား ပြန်လည်ကောက်ခံမှုကြောင့် လက်ရှိအချိန်တွင် တရားမ၀င် ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံနေမှုများ ရှိတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ လမ်းပုံစံကို ကြည့်ကာ ယာဉ်ရပ်နားမှုအား တစ်ဇောင်း၊ အတည့် သို့မဟုတ် အပြိုင်ရပ်နားနိုင်သည့် ပုံစံမျိုး ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အခုလို လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် ကားပါကင်ဦးတာတွေ လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ဆိုပြီး ကားရပ်မယ် ဆိုရင်လည်း ပိုက်ဆံပေးပြီးမှ ရပ်ရမယ်။ ညအိပ်ကောက်ခံဖို့တော့ အစီအစဉ် မရှိသေးဘူး။ သတ်မှတ်ချိန် နောက်ပိုင်းတော့ မကောက်ဘူး။ ဒါတွေ ကောက်မယ် ဆိုတာကိုလည်း ပြည်သူတွေကို ပြန်ကြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်မေမေသွယ်က ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းတံတား)မှ ရန်ကုန်မြို့တွင်း ခြောက်မြို့နယ်တွင် ယာဉ်ရပ်နား ကန့်သတ်ဇုန် ရှစ်ဇုန်တွင် ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဈေးပြိုင်တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် အငှားချမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဈေးပြိုင်တင်ဒါ စည်းကမ်းချက်နှင့် လျှောက်လွှာပုံစံများကို ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ မြို့တော်ခန်းမ (ဒုတိယထပ်) အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းနှင့် တံတား) တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ၀ယ်ယူလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
တင်ဒါအား သြဂုတ် ၂၄ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်အထိ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ကာ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် တင်ဒါရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံမှုများမှာ တရားမ၀င် ကောက်ခံနေခြင်းများ ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး လက်ရှိတွင်လည်း ကောက်ခံမှုများ ရှိနေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တွင် နေထိုင်သူများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
“လသာလမ်းနဲ့ မဟာဗန္ဓုလလမ်းမှာဆို ပိုဆိုးတယ်။ နည်းနည်းလေး ရပ်လို့မရဘူး။ ရပ်ဖို့လုပ်တာနဲ့ ၂၀၀ ပဲ။ ဘယ်ကကောက်လို့ ကောက်မှန်းလည်း မသိဘူး။ မေးရင်လည်း ရေရေလည်လည် ရှင်းမပြနိုင်ဘူး” ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ယာဉ်ရပ်နားခ ကောက်ခံခြင်းများကို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက်တွင် ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။
Posted in Headline, NewsTagged ရန်ကုန်LeaveaComment on ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့တွင်းခြောက်မြို့နယ်တွင် ယာဉ်ရပ်နားခ တစ်နာရီ ကျပ် ၂၀၀ နှုန်းဖြင့် ပြန်လည်ကောက်ခံမည်
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ KTV တစ်ခုရှေ့တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးအား အခြားလူသုံးဦးက ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အရိုက်ခံရသည့် အမျိုးသား သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သြဂုတ် ၁၉ ရက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (စ) ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သည့် ဒေါ်…..(၄၂ နှစ်) သည် သြဂုတ် ၁၈ ရက် နံနက် ၆ နာရီခန့်က နေအိမ်တွင်ရှိနေစဉ် ၎င်း၏တူဖြစ်သူ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ မောင်းနှင်သည့်အလုပ် လုပ်ကိုင်သည့် ကို… (၂၁ နှစ်) ဆိုသူမှာ အရိုက်ခံရပြီး ဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရသဖြင့် သွားရောက်ကြည့်ရှု မေးမြန်းရာ ဆေးရုံသို့ရောက်ရှိချိန်တွင် တူဖြစ်သူမှာ ဒဏ်ရာများရရှိကာ သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ဒဏ်ရာများရရှိကာ သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူများအား ဖြစ်စဉ်ကိုမေးမြန်းရာ ကို….(၂၁ နှစ်) မှာ ယင်းနေ့နံနက် ၅ နာရီခန့်တွင် ၎င်း၏သူငယ်ချင်း ငါးဦးနှင့်အတူ မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်ရှိ KTV တစ်ခု၌ သီချင်းဆိုပြီး ပြန်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့အပြန်တွင် အဆိုပါ KTV ရှေ့ အရောက် အခြားအမျိုးသား သုံးဦးနှင့် စကားများ ရန်ဖြစ်ရာမှ အရိုက်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့အရိုက်ခံရသဖြင့် ကို….(၂၁ နှစ်) မှာ လက်ဖျံစုတ်ပြဲဒဏ်ရာ၊ လက်ကောက်ဝတ် ပြတ်ရှဒဏ်ရာ၊ ဒူးပွန်းဒဏ်ရာများ ရရှိကာ သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
“ကျူးလွန်သူတွေကို ဖမ်းမိပါပြီ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ စစ်ဆေးဆဲပါ” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို မြောက်ဥက္ကလာပ မြို့မရဲစခန်းက (ပ)၁၀၈၅/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၀၂/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ကျူးလွန်သူများဖြစ်သည့် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နေ ဝေယံဟိန်း၊ ရဲဝင်းအောင်နှင့် ကျော်သူဟိန်း ဆိုသူတို့အား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged ရန်ကုန်, ရိုက်နှက်မှုLeaveaComment on မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ KTV တစ်ခုရှေ့တွင် လူသုံးဦး ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်မှုကြောင့် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံး
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ Friendly Clinic ဆေးကုခန်းတွင် နိုင်ငံခြားသား တရားမ၀င် ဆေးကုသသူ၊ ခွဲစိတ်ခန်းနှင့် တရားမ၀င် ဆေးဝါးများဖြင့် ဆေးကုသနေသည့်အတွက် ဥပဒေအရ တရားစွဲဆို အရေးယူထားပြီး တရားမ၀င် ဆေးကုသသည်ဟု ယူဆရသော တရုတ်နိုင်ငံသား နှစ်ဦးကို လက်ရှိအချိန်အထိ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေးကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
“Friendly Clinic ဆေးခန်းမှာ တရားမ၀င် ဆေးကုနေတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကို ဖမ်းဆီးဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ လ၀ကတို့ မြို့နယ်စည်ပင်တို့ကို အကူအညီ တောင်းထားပါတယ်။ လက်ရှိအထိ အကြောင်းပြန်ကြားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဆေးခန်းစစ်ဆေးတုန်းက တွေ့ခဲ့တဲ့ အလှကုန်တွေကိုလည်း FDA က စစ်ဆေးနေပါတယ်။ ထူးခြားမှု မရှိသေးပါဘူး” ဟု ဆေးခန်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာရန်နောင်ထွန်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဆေးခန်းကို ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီက ဇူလိုင် ၂၅ ရက်က ရှောင်တခင် စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် တရားမ၀င် နိုင်ငံခြားသား ဆေးကုသသူများ တရားမ၀င်ဆေးကုသခြင်း ရှိ မရှိ၊ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရှိ မရှိ၊ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိမရှိ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာခြင်း ရှိ မရှိ စသည်တို့ကို စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ Friendly Clinic ဆေးကုခန်းတွင် နိုင်ငံခြားသား တရားမ၀င် ဆေးကုသသူ၊ ခွဲစိတ်ခန်းနှင့် တရားမ၀င် ဆေးဝါးများဖြင့် ဆေးကုသနေသည့်အတွက် အမျိုးသား ဆေးဝါးဥပဒေ၊ ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေများဖြင့် ဆေးခန်းပိုင်ရှင်အား အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
“ဆေးခန်းလိုင်စင်က ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းကရထားပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါတယ်။ သက်တမ်းမကုန်ခင်မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်လျှောက်ထားတယ်။ ပုဂ္ဂလိက အထွေထွေရောဂါကုဆေးခန်း သက်တမ်းတိုး စစ်ဆေးချက်ပုံစံနဲ့ကို ကျွန်တော်တို့ ဒေါပုံမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီး၊ မြို့နယ်စည်ပင်၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အခွန်မှူး၊ လမ်းဦးစီးဌာန၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနတို့က စစ်ဆေးပြီးတော့ သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ဒီဆေးခန်းကို သက်တမ်းမတိုးရသေးဘူး။ အခုစိစစ်ဆဲမှာဘဲ ဒီကိစ္စပေါ်တာပါ” ဟု ၎င်းကဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလအတွင်းကလည်း ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ ပုဂ္ဂလိကဆေးကုခန်း ခြောက်ခုကို ရှောင်တခင် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ယင်းတို့အနက် နိုင်ငံခြားသား တရားမ၀င် ဆေးကုသသူ၊ တရားမ၀င် ဆေးဝါးနှင့် ခွဲစိတ်ခန်းများ ပါဝင်သည့် ဆေးခန်းများအား ဥပဒေအရ တရားစွဲဆို အရေးယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged Friendly Clinic, ရန်ကုန်LeaveaComment on Friendly Clinic ဆေးခန်းတွင် တရားမ၀င် ဆေးကုသည်ဟု ယူဆရသော တရုတ်နိုင်ငံသား နှစ်ဦးအား လက်ရှိအချိန်အထိ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေး
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးကို တုတ်ဖြင့်ရိုက်နှက်သည့် ရဲအရာရှိ တစ်ဦးအား အရေးယူရန် စုံခုံဖွဲ့စစ်ဆေး
ရွှေတိုင်သား Facebook စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရစဉ်
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးကို တုတ်ဖြင့် ရိုက်နှက်ခဲ့သည့် ရဲအရာရှိတစ်ဦးအား အရေးယူရန် စုံခုံဖွဲ့ စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သြဂုတ် ၁၄ ရက်တွင် အနောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“ဖြစ်သွားတဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ စုံခုံဖွဲ့ စစ်ဆေးနေပါတယ်” ဟု အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် တော်ဝင်လမ်း၌ သြဂုတ် ၆ ရက်ညပိုင်း၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာတွင် ဗီဒီယိုဖိုင်နှင့်အတူ သြဂုတ် ၁၃ ရက် ညပိုင်းက ပျံ့နှံ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင်အား ရွှေတိုင်သား အမည်ရှိ Facebook စာမျက်နှာက လွှင့်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲတွင် ကနဦးမှာ အမျိုးသား သုံးဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို တုတ်ကိုင်ထားသည့် အမျိုးသားက ဆဲဆိုပြီး လမ်းမပေါ်တွင် ထိုင်ခိုင်းရာ နှစ်ဦးမှာ ထွက်ပြေးသွားပြီး တစ်ဦးတည်းသာ ကျန်ခဲ့သည့် အချိန်တွင် တုတ်ကိုင်ထားသည့် အမျိုးသားက ရိုက်နှက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ဝင်းက “ကျွန်တော်ရောက်တော့ အရိုက်ခံရတဲ့သူက ဆေးရုံကို ရောက်နေပြီဆိုတော့ အဲဒီကို လိုက်ကြည့်တယ်။ ဆေးရုံရောက်တဲ့ အချိန်မှာ အရိုက်ခံရတဲ့ ကောင်လေးက ဆေးရုံက ဆရာဝန်တွေကိုလည်း ဆဲဆိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း ဆဲဆိုတယ်။ အရိုက်ခံရတဲ့ ကောင်လေးက မူးမူးနဲ့ ဆေးရုံက သူနာပြုမလေးကို သူ့မိန်းမနဲ့ တူတယ်ဆိုပြီး လိုက်ဖက်တယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တော့ သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာက ဘယ်လောက်ပြင်းလဲ ဆေးရုံက တာဝန်ရှိသူတွေကို မေးတော့ ဒဏ်ရာကကွဲ တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ စခန်းမှာ ခေါ်ထားဖို့ စခန်းကို ပြန်ပို့ခဲ့တယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
တုတ်ကိုင်ရိုက်နှက်နေသည့် အမျိုးသားမှာ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအုပ် ဖြိုးဝေမင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗီဒီယိုဖိုင်နှင့်အတူ တင်ထားသည့်စာ အချို့မှာ မှားယွင်းနေကြောင်း ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ဝင်း၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက “ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲပါတဲ့နေရာအနီးမှာ အုပ်စုနှစ်စု ရန်ဖြစ်နေကြတာ။ ရန်ဖြစ်နေတုန်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး သတင်းရလို့အပြင် ၀တ်ဝတ်ပြီး လိုက်လံစုံစမ်းနေတဲ့ ရဲအုပ်ရဲ့ကားက အဲဒီနားကို ရောက်လာတယ်။ ရောက်တဲ့အချိန်မှာ အရိုက်ခံရတဲ့ ကောင်လေးက ရဲအုပ်ကားဖုံးပေါ်ကို မူးပြီးလဲကျတယ်။ လဲကျပြီး ရဲအုပ်ကိုလည်း ဆဲဆိုတာတွေ ပြုလုပ်တယ်လို့ သိရတယ်။ ရဲအုပ်ရိုက်တဲ့ တုတ်ကလည်း သံတုတ်လည်း မဟုတ်၊ နံပါတ်တုတ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အုပ်စုနှစ်ဖွဲ့ရန် ဖြစ်တုန်းက ကျန်ခဲ့တဲ့တုတ်ပါ” ဟု ပြောကြားသည်။
ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ဝင်းက “စုံခုံဖွဲ့စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ ရဲအရာရှိကို ကျွန်တော်က နယ်မြေအတွင်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေက အရမ်းပျံ့နှံ့နေတော့ စုံစမ်းဖမ်းဆီးပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဖြစ်သွားတာလည်း ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်စဉ်အရသူက ရိုက်နှက်ခဲ့ပေမယ့် သူ့အပေါ် အရေးယူမှုတွေ ပြုလုပ်လာရင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးသူ့ကို အရေးယူမှုပေါ့အောင်၊ အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်အောင် လိုက်လံကူညီ ပေးသွားမှာပါ” ဟု ပြောကြားသည်။
ရိုက်နှက်ခံရသည့် အမျိုးသားမှာ ဗားကရာဆိပ်ကမ်းရှိ လှေပေါ်တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး အခင်းဖြစ်ပွားပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် ၎င်း၏လှေဦးစီးမှ ကြည့်မြင်တိုင်ရဲစခန်းတွင် လာရောက် ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged ရန်ကုန်LeaveaComment on ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦးကို တုတ်ဖြင့်ရိုက်နှက်သည့် ရဲအရာရှိ တစ်ဦးအား အရေးယူရန် စုံခုံဖွဲ့စစ်ဆေး